Meydkii Khashoggi waxaa lagu baabi’iyay Kimikada Aashitada | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Meydkii Khashoggi waxaa lagu baabi’iyay Kimikada Aashitada
Mas’uul ka tirsan dowlada Turkiga ayaa sheegay in meydka Jamal Khashoggi lagu baabi’iyay kimikada aashitada kadib markii lagu dhex diley qunsuliyada Sacudi Carabiya ay ku leedahay magaalada Istanbul ee dalka Turkiga.
Yasin Aktay oo ah lataliyaha Madaxweynaha Turkiga Erdogan ayaa u sheegay wargeyska Hurriyet in dadkii diley Khashoggi ay ku baabi’iyeen meydkiisa kimikada aashitada si aan dib dambe loo ogaan halka lagu diley.
“Wararka ugu dambeeya ee la xiriira dilka Khashoggi sababta ay u jarjareen meydkiisa waxa ay ahayd si ay u fududaato in kimikadaas dhaqso loogu baabi’iyo.”ayuu sii raaciyay warkiisa Aktay.
Sarkaal ka tirsan maamulka Turkiga ayaa wargeyska Washington Post u sheegay in cadeymo kimikal ah oo laga helay beerta qunsulka ay tilmaamayaan inay suurtogal tahay in halkaa ay tahay meesha medka Khashoggi lagu jarjaray kadibna lagu baabi’iyay kimikada aashitada ama aysidka.
Sida lagu daabacay wargeys ka soo baxa dalka Turkiga baarayaasha Turkiga ayaa loo diiday inay baaraan biyaha ceel ku dhex yaal guriga qunsulka Boqortoyada Sacudi Carabiya ee magaalada Istanbul.
Afhayeen u hadlay Wasaarada Arrimaha Dibbada Maraykanka Robert Palladino ayaa ku baaqay in la keeno meydka Khashoggi si qoyskiisa ay u aastaan.
Hatice Cengiz oo ah gabadhii uu doonayay inuu guursado Khashoggi kuna sugaysay afaafka hore ee qunsuliyada Sacudi Carabiya ayaa sheegtay in waxa lagu sameeyay meydka Khashoggi ay tahay wax fool xun oo aan naxariis lahayn.
HALKAN KA AQRI SHEEKADAAN